वाइल्डफायरको साथ आगोमा प्रवर्धनहरू सेट गर्दै
बुधबार, जुलाई 21, 2010 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 लोरेन बल
मार्केटरहरू दुबै प्रेम र घृणा स्वीपटेकहरू र प्रतियोगिताहरू। जबकि प्रभावी उपकरणहरू ब्रान्ड जागरण निर्माण गर्न र सम्भावित सूचिहरू सिर्जना गर्न, ती थकाइलाग्दो, समय खपत, र प्रशासनिक गर्न चुनौतीपूर्ण छन्। त्यसोभए कहिले रेड वाल लाइभ को डेनियल हर्नन हाम्रो ग्राहकको लागि स्कूल पदोन्नति फिर्ता एक उत्कृष्ट विचारको साथ आयो क्रांति आईजको डा। जेरेमी कियानो म विचारका बारे उत्साहित थिएँ, तर कार्यान्वयनको बारेमा चिन्तित थिए।
प्रतियोगिता सरल छ:
अभिभावकहरूले आफ्ना चश्मा र सनग्लास लगाएका आफ्ना बच्चाहरूको फोटो सबमिट गर्छन्
त्यसोभए उनीहरूले आफ्ना साथीहरू र परिवारलाई भोट हाल्न लगाउँछन्।
सब भन्दा बढी मतको साथ बच्चाले एक हेलिकप्टर सवारी, एक आइस खेलको लागि टिकट र एक जाम्बोनी मेशीनमा सवारी, र चिडियाखानाको दृश्य पर्दा पछाडि जित्छ।
प्रतिस्पर्धा पछाडि उद्देश्य, यति साधारण छैन:
चित्रहरू संकलन गर्नुहोस् जुन हामी बाल अभ्यासको जागरूकता बनाउन प्रयोग गर्न सक्छौं
फेसबुक पेजको लागि फ्यानहरू बनाउनुहोस्
ईमेल ठेगानाहरू स .्कलन गर्नुहोस्
प्रशासन डरलाग्दो थियो। तर यो इन्टरनेट र आईफोनको युग हो, र यसको लागि सँधै "अनुप्रयोग" हुन्छ। यस अवस्थामा अनुप्रयोग हो वाइलडभाएर। मलाई वाइल्डफायर प्रयोग गर्ने बारे के मनपर्‍यो:
यो अभियान निर्माण गर्न को लागी अपेक्षाकृत सजिलो थियो। (ग्राफिक्समा तपाइँ कति समय खर्च गर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै तपाइँ एक घण्टा भन्दा कममा हुन सक्नुहुन्छ)
हामीसँग विकल्पहरू थिए: स्वीपटेक्स, कुपन, फोटो र निबन्ध प्रतियोगिताहरू
फ्यान पृष्ठमा सजिलै सम्मिलित गर्दछ।
फेसबुक आवश्यक छैन --WWWfire पनि वेबसाइट र एक माइक्रोसाइट को लागी तपाइँ विजेताहरु लाई निर्देशित गर्न को लागी सरल विजेट प्रदान गर्दछ।
साधारण प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसले व्यक्तिलाई आफ्ना साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्न र प्रतिस्पर्धा भाइरल विस्तार गर्न सजिलो बनाउँदछ।
मूल्य उचित छ। अभियानको लम्बाई, र तपाईंलाई आवश्यक कस्टमाइजेशनको मात्रामा निर्भर गर्दछ, तपाईंको प्रशासनको बजेटले यस प्रोग्राम चलाउन खर्च गरेको खर्चको अंश हुनेछ। (डा। सियानोको बजेटले यस छ हप्ताको कार्यक्रमको लागि करीव २०० डलर खर्च गरे)
मलाई वाइल्डफायरको बारेमा के मनपर्दैन: (यसलाई सामना गर्न दिनुहोस्, केहि पनि राम्रो छैन)
प्रति कम्प्युटरमा केवल एउटा प्रस्तुतीकरण - म कारण बुझ्दछु, तर यसले हामीलाई साइन अप गर्नबाट रोक्दछ जब उनीहरू डा। सिआनोको कार्यालयमा आउँछन्। जबकि हामी रिमाइन्डरहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, सबैजना घर जाने र गर्दैनन्। (मैले यो पोष्ट लेखे पछि, हामीले सबमिशनहरूको संख्या बढाउने तरिका फेला पार्‍यौं, त्यसैले एक कुरा कम मनपर्दैन)
हामी सबमिट गर्ने सबैको ईमेलहरू कब्जा गर्न सक्दछौं, तर सबैले मत दिदैनन्। यस अभियानको वास्तविक लाभ मेलिंग सूची विस्तार गर्दैछ। त्यसैले हामी ओ आमा बुबा र उनीहरूका सबै साथीहरू र परिवार सदस्यहरू चाहन्छौं। यो पूरा गर्न हामी स्विच गर्नेछौं फार्मस्ट्याक मतदानको लागि
तल लाइन ... म वाइल्डफायरको बारेमा उत्साहित छु, र आउने महिनाहरूमा ग्राहकहरूको लागि विभिन्न प्रकारका परीक्षणहरू गर्नेछु। हाम्रो आफ्नै सहित: बिज कार्ड बदलाव के तपाईंले वाइल्डफायर प्रयोग गर्नुभयो? उत्पादनसँग तपाईले के अनुभव गर्नुभयो?
नबिर्सनुहोस् - जीतको लागि तपाईंको बच्चा वा नातिनातिना प्रविष्ट गर्नुहोस् हेलिकप्टर, जाम्बोनी मेशीन र अधिक सवारी गर्नुहोस्!
टैग: भिडियो विज्ञापन
एसईओ वर्थ? १० मिलियन कहिले हो?
लोभ, डर र विफल उद्यमीहरू